Dadka ka adeeganaya Suuqa Bakaaraha oo lagu dhaliilay arin halis ku ah shacabka Muqdisho | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Dadka ka adeeganaya Suuqa Bakaaraha oo lagu dhaliilay arin halis ku ah...
Dadka ka adeeganaya Suuqa Bakaaraha oo lagu dhaliilay arin halis ku ah shacabka Muqdisho
Previous articleXOG Cusub:Maxaa loo xiray Agaasimihii Aamin Ambulance C/qaadir C/raxmaan..?
Next articleSidee Soomaalida Nairobi u arkaan dib u dhigista dacwada badda?
Maxaa ku qasbay ninkan inuu si layaab leh hab u siiyo gabar askeri ahayd oo dishay walaalkii?
Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaalkiisii Washington
Dowladda Cupa oo Cadaysay Inay Noolyihiin Dhaqaatiirtoodii Loga Af-duubtay Kenya
Jubaland oo walaac ka muujisay talaabo ay qaadey Dowladda Soomaaliya + Sawirro
Maxay ka wada hadleen Xasan Sheekh & James Swan?
SAWIRRO:Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madax saameyn kuleh qaarada Africa